China Auto Ac Compressor Ye Honda N-BOX / Honda Brio / Honda Jazz vagadziri uye vanotengesa | Hollysen
BRAND NEW AUTO AC KUSIMBITSA
Automobile air conditioning compressor ndiyo "moyo" yemotokari mamiriro ekugadzirisa. Kana iyo mota yemhepo inodzora system yashandurwa, iyo compressor inopinda mukuita, kumanikidza uye kutyaira iyo firiji kuburikidza neyakavharwa mweya wekugadzirisa mamiriro. Iyo firiji inotora kupisa mumotokari kuburikidza nekupisa kwekupisa mune evaporator, uye inoparadzira kupisa kune kunze kwemota kuburikidza nekondensera, kuitira kuti itapise tembiricha mumota uye iigadzire munzvimbo yakanaka.
Chikamu Rudzi: A / C Compressors
Kuyera kweBhokisi: 250 * 220 * 200MM
Mutengo wechigadzirwa: 5 ~ 6KG
Nguva yekuendesa: Mazuva 20-40
Garandi: Yemahara 1 Year Unlimited Mileage Warranty
Tsvaga uye uone matambudziko eac
Iyo system yemota yemhepo inogadzirisa ndeye yakasimbiswa yakavharidzirwa system. Inoenderana nekunyaradzwa kwekufamba, hupfumi uye kuchengetedzeka kwemotokari iyo inoshanda zvakajairika. Kuti utarise system yemhepo inodziya mweya. Chekutanga, iwe unofanirwa kunge uchiziva nezvayo uye nekunzwisisa iyo yemhepo-inotonhorera system yemota, kugona kwayo firiji musimboti, system gadziriso, chimiro, basa, nezvimwe; uye uve nehukama mukudyidzana uye nebasa rekugadzirisa; Iyo inoziva nezve akasiyana anokwanisika kana ari nyore kuburitsa Zviratidzo, zvinokonzeresa uye nzira dzekugadzirisa matambudziko ekukundikana.
Kuongorora uye kuyedzwa kwefriji compressors:
Iyo firiji compressor ndiwo moyo wesystem yemota mhepo-kutonhodza. Iyo inokonzeresa kumanikidza uye kutenderera kweiyo system iyo firiji inoshanda mvura. Kazhinji inofanirwa kunge iri yekutarisa uye kuyedza yekumanikidza kushanda uye leakage.
Kuti uedze kushanda kwekumanikidza kweiyo compressor, pasina kubvarura iyo system, zvinodikanwa kuti ubatanidze matatu-nzira yekumanikidza geji yakatarwa yekuyedzwa.
Kana paine imwe huwandu hwefriji muhurongwa, injini inowedzera. Panguva ino, iyo pointer yeiyo yepasi-yekumanikidza geji inofanira pachena kudonha, uye yakanyanya-kumanikidza kumanikidza kuchakwirawo zvakanyanya. Iyo yakanyanya kurira, iko kwakanyanya kudonha kweiyo pointer, zvichiratidza kuti iyo compressor iri kuita nemazvo; kana ikamhanyisa Iyo yakaderera yekumanikidza mita pointer inodonha zvishoma uye iyo yekudonha mwero haina kukura, zvichiratidza kuti kumanikidza kugona kweiyo compressor yakaderera; kana yakaderera yekumanikidza mita pointer zvisingaite kuratidza kana ichimhanyisa, zvinoreva kuti iyo compressor haina compression kunyatsoshanda zvachose.
Chikamu chakanyanya kushushikana checompressor inodonha ndiyo shaft seal (Mafuta chisimbiso). Sezvo iyo compressor inowanzo tenderera kumhanya kwakanyanya uye tembiricha yekushanda yakakwira, iyo shaft chisimbiso inowanzo tenderera. Kana paine zvisaririra zvemafuta pane clutch coil uye yekukoka mukombe weiyo compressor, shaft chisimbiso inodonha zvechokwadi.
Zvikonzero zvikonzero zvinokonzeresa kukuvara kwecompresssa ndezvi:
1. Iyo air conditioner system haina kuchena, uye kusviba kwemasanganiswa kunoyamwa mukati ne compressor;
2. Mafriji akawandisa kana mafuta ekuzora muhurongwa anokanganisa compressor ne "sando yemvura";
3. Iyo tembiricha ye compressor inoshanda yakanyanya kukwirira kana iyo yekushandisa nguva yakanyanya kureba;
4. Iyo compressor ishoma nemafuta uye yakanyanya kusakara;
5. Iyo yemagetsi clutch yeiyo compressor inotsvedza uye iyo yekukwesana tembiricha yakanyanya kukwirira;
6. Iko kumisikidza kwesimba kwecompressor idiki zvakanyanya;
7. Iyo yekugadzira mhando yeiyo compressor haina kukwana.
Kavha & kutumirwa
Yakajairwa katoni kurongedza kana yakasarudzika ruvara bhokisi kurongedza.
Iyo Consignee kana nzvimbo yekutumira
Yakasarudzika sevhisi: Isu tinokwanisa kusangana nezvinodiwa nevatengi vedu, ingave diki batch yemhando dzakasiyana siyana, kana kuwanda kugadzirwa kweOEM kugadzirisa.
1. Batsira vatengi kugadzira system inoenderana mhinduro.
2. Govera technical technical yezvigadzirwa.
3. Batsira vatengi kubata nezvinetso mushure mekutengesa.
1. Isu tave tichigadzira auto air conditioning compressors kweanopfuura makore gumi nemashanu.
2. Kumisikidza kwakaringana kwenzvimbo yekumisikidza, kudzikisira kutsauka, nyore kuunganidza, kumisikidza mune imwe nhanho.
3. Iko kushandiswa kwesimbi yakanaka yesimbi, dhigirii yakakura yekuomarara, kugadzirisa hupenyu hwebasa.
4. Kumanikidzwa kwakakwana, kutakurwa kwakanaka, kunatsiridza simba.
5. Paunenge uchityaira uchimhanya kwazvo, simba rekuisa rinoderedzwa uye mutoro weinjini unoderedzwa.
6.Smooth oparesheni, yakaderera ruzha, diki vibration, diki yekutanga torque.
7. 100% kuongorora usati wasununguka.
Pashure: 12v 24v Inotakurika Universal Roof Pamusoro Yakakwira Rori Kurara Magetsi Auto Kupaka Nzvimbo Inotonhorera Mhepo Inodzora
Zvadaro: Ac Compressor Gadzira Fekitori yeMazda CX3 / Mazda Demio / Mazda 3
Auto Ac Compressor uye batira Assembly Manufact ...
12V Auto Ac Compressor YeMitsubishi Colt / MI ...
Ac Compressor gadzira Factory For Mazda CX3 ...
12V Auto A / C Compressor gadzira Factory For ...
Brand New AC Compressor pamwe batira For Nissan ...